Waa sidee xaalka degaanka Wisil saaka? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa sidee xaalka degaanka Wisil saaka?
Xaalad degan ayaa saaka laga soo sheegaya degaanka Wisil, kadib markii uu shalay ka dhacay dagaal kharaar oo sababay qasaaro xooggan
WISIL, Soomaaliya - Xaaladda degaanka Wisil ayaa saaka degan, kadib markii uu shalay ka dhacay dagaal adag oo u dhaxeeyay Kooxda Al-Shabaab oo soo qaadday duullan duqeymo iyo qaraxyo ku biilwday iyo ciidamada Daraawiishta Galmudug oo kaashanayay dadka shacabka ah.
Ku dhawaad 10 miino oo nuuca dhulka lagu aaso ah, oo ay shalay Al-Shabaab ku duugeen inta badan waddooyinka gala magaalada ayay saakay ciidamu ku guuleysteen in ay saaraan, qaarna qarxiyaan, waxaana hadda socda howl-gal gudaha magaalada looga baarayo walxaha qarxa.
In-ka-badan 30 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah, ayaa ku geeriyooday dagaalkii shalay, mana muuqato qabanqaabo uu wado maamulka Galmudug oo looga hor tagayo dhibaatada ay Al-Shabaab ku hayaan dadka degaanka.
Degaanka Wisil oo hoos taga degmada Hobyo ee gobolka Mudug, ayaa ka mid ah magaalooyinka aysan walgood ka arrimin Al-Shabaab, waxayse hadda gobolka oo a wadaan dhaqdhaqaaq xooggan.
Degaanka Bacaadweyn ayay si guud ula wareegeen maamulkisa billowgii bishii ramadaan, kadib dowr dagaal oo ay la galeen dadka degaanka.
Madaxda Maamulka Galmudug ayaa u muuqda in ay ku fashilmeen amniga gobollada Mudug iyo Galgaduud, oo sanad iyo barkii la soo dhaafay uu amnigoodu faraha ka baxay.